« Festival de Cannes »: vahiny manokana, hampahafantatra ny « Rambo, Last Blood », i S. Stallone - ewa.mg
News - « Festival de Cannes »: vahiny manokana, hampahafantatra ny « Rambo, Last Blood », i S. Stallone
Tanterahina, amin’izao fotoana izao, ny andiany faha-72, amin’ny « Festival » iraisam-pirenena ho an’ny sarimihetsika, fanao any Cannes, na ilay fantatra amin’ny hoe « Festival de Cannes ». Goavana sy malaza indrindra, maneran-tany, ity hetsika ity, izay mbola mitazona, mandraka ankehitriny, ny tanjony: ny hanome voninahitra ny sarimihetsika, ny hampahafantatra sy ny hanome lanja ireo vokatra tsara indrindra ary ny hampiroborobo ny indostrian’ny sarimihetsika avy amin’ny vazan-tany efatra.
Isan-taona, be mpanaraka (amin’ny fahitalavitra sy amin’ny « internet ») ny fidiran’ireo mpilalao sarimihetsika, mpanatontosa sy olo-manan-kaja maro ao amin’ny toerana hanatanterahana ny « festival ». Samy manao izay ho afany ireo andrarezina amin’ny fampisongadinana ny tenany, na amin’ny fitafy na amin’ny fihetsika.
Na izany na tsy izany, arahin’ny maro koa ny zava-baovao, izay heverina fa hanamarika ny andiany tsirairay amin’ny « Festival de Cannes ». Ny amin’ity taona ity àry, anisan’ny andrasan’ny maro ny datin’ny 24 mey izao. Ho vahiny manokan’ny hetsika, amin’io andro io, ilay mpilalao « film » malaza, i Sylvester Stallone. Tsy izay ihany fa hampahafantariny, amin’io fotoana io, ny andiany fahadimy amin’ny « Rambo », horonantsary tena ahafantarana azy, manerana izao tontolo izao.
« Rambo, Last Blood » ny lohatenin’ity andiany fahadimy ity, tontosain’i Adrian Grunberg, ary hivoaka amim-pomba ofisialy ny 25 septambra izao. Fantatra fa nohavaozina ihany koa ny andiany voalohany amin’ity « film » ity. Ankoatra ity horonantsary vaovao be ity, hahaliana ny maro ny fomba hidiran’i Sylvester Stallone any amin’ny « Festival de Cannes ».
Dimy taona lasa izay, raha namonjy ity hetsika ity i John Rambo, fiara tsy laitram-bala na « blindé » an’ny miaramila no nitondra azy, niaraka tamin-dry Mel Gibson sy ry Jason Statham ary ry Harrison Ford.
L’article « Festival de Cannes »: vahiny manokana, hampahafantatra ny « Rambo, Last Blood », i S. Stallone a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 17/05/2019
La capitalisation des fruits des recherches scientifiques devient une tendance dans les établissements d’enseignement supérieur. Après la Journée scientifique sur l’agriculture durable, c’est l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo qui a également organisé sa première édition de journées scientifiques, les 10 et 11 mars derniers. « Au sein de l’ESPA, une pléthore de recherche et d’innovation est continuellement développée dans les domaines du Génie Civil, des Procédés Industriels, des Sciences et Technologies Industrielles et des Sciences de la terre. L’organisation des journées scientifiques donne une occasion aux chercheurs de démontrer les contributions pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) », ont indiqué les organisateurs de l’événement. Ils ont réuni en un lieu les acteurs œuvrant dans le développement durable à Madagascar. Domaines. D’ailleurs, le thème général choisi pour cette première édition s’intitule « Ensemble face aux ODD ». En effet, les domaines abordés durant les deux journées ont été globalement liés au développement durable, et les discussions axées autour de trois points, notamment les industries, l’innovation et les infrastructures ; la consommation et la production responsable ; et finalement sur les eaux propres et les énergies propres. Selon l’ESPA, l’objectif principal des journées scientifiques est de promouvoir les résultats de recherche liés à l’atteinte des ODD. Les journées ont ciblé principalement les étudiants, les doctorants, les enseignants, les chercheurs, les industriels, etc. Par ailleurs, les journées scientifiques contribuent d’une manière significative à la capitalisation, l’exposition et la valorisation des résultats de recherches qui est au centre de toutes les attentions au niveau de l’ESPA, selon ses promoteurs. À terme, cette démarche devrait permettre de réaliser l’un des objectifs phares de l’École, qui est l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la recherche. Antsa R. L’article Industries et infrastructures : Journées scientifiques de l’ESPA les 10 et 11 mars est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Industries et infrastructures : Journées scientifiques de l’ESPA les 10 et 11 mars a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fandroahana mpiasa tsy ara-drariny: manome fe-potoana 72 ora ny sendikàn’ny Jirama
Tsy manaiky ny fanaparam-pahefana mandroaka mpiasa tsy ara-drariny intsony ny farimbon-tsendikàn’ny mpiasa. Handray fanapahan-kevitra hentitra izy ireo raha tsy misy ny fanovàna ataon’ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena. Tsy rariny intsony! Tsy manaiky lembenana amin’ny fandroahana mpiasa tafahoatra ataon’ny mpitantana ny Jirama ny farimbon-tsendikàn’ny mpiasa. Nambaran’ireo mpitondra tenin’izy ireo, omaly, fa tsy rariny ary tsy azo ekena intsony ny fihetsika sy ny fepetra raisin’ny mpitantana ity orinasam-panjakana ity, satria tsy hita soritra ny fanajana ny zon’ny mpiasa, ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahan’ny sendikà, izay faritana sy arovan’ny Lalàmpanorenana eto Madagasikara. Be loatra ny fandroahana mpiasa tsy ara-drariny ato amin’ny orinasa, ka manome fe-potoana 72 ora izahay, handraisan’ny fanjakana sy ny tompon’andraikitra fepetra. Hiditra amin’ny dingana mafimafy kokoa izahay raha tsy mahazo fahafaham-po”, hoy ihany izy ireo. Maro ny tranga hita sy fantatry ny sendikà. Singanina amin’izany ny mpiasa iray, nandray anjara tamin’ny tolona, nidina an-dalàmbe, ny volana avrily 2018 teo ireny. Naka fanomezan-dalana tsy hiasa (conge) ilay mpiasa tamin’ny voalohany, ary nangataka indray taty aoriana, saingy tsy nomen’ny mpitantana ny orinasa intsony. Nangatahana fanazavana ary nampiakarina filankevi-pifehezana (conseil de discipline) izy rehefa niverina niasa. “ Tsy azo roahina”, hoy ny mpanara-maso ny asa Nangatahana ny hevitry ny foibe mpanara-maso ny asa, ary nangatahan’ity farany ny hampihaonana ilay mpiasa sy ny mpitantana ny Jirama, saingy tsy nipoitra mihitsy ity farany. Namoaka fanapahan-kevitra ny mpanara-maso ny asa avy eo, fa “tsy azo roahina ity mpiasa ity”. Saingy noroahin’ny mpitantana ny Jirama ihany ilay mpiasa, ny 6 novambra teo. Nandefa taratasy tamin’ny alalan’ny vadi-tany tany amin’ny mpitantana ny Jirama ny sendikàn’ny mpiasa, saingy tsy nisy valiny. Nampandre izany tany amin’ny sampana mpanara-maso ny mpiasa indray ary nandefasan’ity farany taratasy fampiatoana (lettre de mise en demeure) an’ilay fandroahana ny mpitantana ny Jirama, milaza fa “tsy azo roahina ilay mpiasa ary tokony hiverina handray ny asany”. Tsy namoaka valiny hatrany anefa ny mpitantana ny orinasa, ary nalefan’ny foibe mpanara-maso any amin’ny fitsarana ny raharaha, ankehitriny. Alaina amin’ny kitapombolan’ny orinasa Tranga hafa koa, ny fandroahana mpiasa solontenan’ny mpiasa ao anaty sendikà. Namoaka fanapahan-kevitra koa ny sampana mpanara-maso ny mpiasa fa tsy azo roahina ity mpiasa ity. Ankoatra ireo, nisy koa ny fandroahana tsy ara-drariny ny talen’ny mpitantana ny mpiasa (DRH) tao amin’ny Jirama. Nitory ity farany ary nahazo rariny, ka nandoa volabe ho azy ny Jirama, vola nalaina tao amin’ny kitapom-bolan’ny orinasa. “Izany hoe, lasa vesatra ho an’ny orinasa indray ny fanapahan-kevitra tsy rariny raisin’ny mpitantana”, hoy ireo mpitondra tenin’ny farimbon-tsendikàn’ny mpiasa. Randria L’article Fandroahana mpiasa tsy ara-drariny: manome fe-potoana 72 ora ny sendikàn’ny Jirama a été récupéré chez Newsmada.
Tatitra ofisialin’ny covid-19 :: Lavon’ny valanaretina koa ny filohan’ny FLM teo aloha
Taorian’ny fahafatesan’ny Pasitora Rakotonirina David, filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) dia nindaosin’ ny fahafatesana noho ny valanaretina Covid-19 teo amin’ny faha-80 taonany, omaly, ny filohan’ity fiangonana ity teo aloha, Rabenorolahy Benjamin (1989 – 2004). Nambaran’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny Ivon-toeram-pibaikoana amin’ ny ady amin’ny valanaretina (CCO) fa “namoy ny ainy teto Analamanga, vokatry ny aretina Covid-19, ny filohan’ny FLM teo aloha”. Loharanom-baovao hafa indray anefa no milaza fa “vokatry ny aretin’ny voa no niteraka ny fahafatesany.” Izy no filoha fahatelo nitantana ny Fiangonana Loterana Malagasy, taorian-dRakoto Andrianarijaona sy Ranaivojaona Razafimanantsoa. Efa nitana ny toeran’ny loholon’i Madagasikara tamin’ny alalan’ny firaisan-kinan’ny antoko ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara (ADM) izy tamin’ny taona 2008. Ny Filoham-pirenena tamin’izany fotoana izany no nanendry azy ho eo amin’io toerana etsy amin’ny lapan’ Anosikely io. Ankoatra azy dia nampahafantarin’ny mpitondra tenin’ny CCO fa «olona iray ihany koa no lavon’ity valanaretina ity tany Antsirabe». Mahatratra sivy amby telopolo ireo nindaosin’ny fahafatesana voarakitra ao amin’ny antontan’ isa ofisialin’ ny CCO, ankehitriny. Fanoloan-toerana Handray ny toeran’ny filohan’ ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) ny filoha lefitry ny FLM, ny pastora Andrianjafy Octave Bénil, taorian’ny nahalasanandRakotonirina David, nitantana izany teo aloha, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Amin’ny volana septambra 2020 no mifarana ny fe-potoam-piasan’ny filoha am-perinasa, ka aorian’izay no hisy ny fifidianana vaovao an’ izay ho filohan’ny FLM indray. Tsy mbola nahazoambaovao kosa, hatreto, ny momba an’izay hisahana ny andraikitry ny filohan’ny Fiombonamben’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM), izay banga noho ny fodiamandrin’ny pasitora Rakotonirina David. L’article Tatitra ofisialin’ny covid-19 :: Lavon’ny valanaretina koa ny filohan’ny FLM teo aloha est apparu en premier sur AoRaha.
Mpiasan’ny CTC sy hotely hopitaly: alefa any amin’ny tobim-pahasalamana
“Alefa hanamafy ny ekipa eny anivon’ny CHU, ny CHRD ary ny CSB ireo mpiasan’ny fahasalamana rehetra noraisin’ny minisiteran’ny Fahasalamana hiasa mandritra ny herintaona tao anatin’ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Covid- 19”, hoy ny talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Fahasalamana, Rakotomalala Dave Patrick. Eo am-pikirakirana ny antontan-taratasy momba ny fandefasana ny mpiasa ny tomponandraikitra amin’izao fotoana izao. Momba ny karaman’ny mpiasan’ny CTC sy ny hotely hopitaly kosa, manaraka dingana ny fikirakirana azy ary misy koa ny olana amin’ny lisitra sy ny antontan-taratsy teo am-pandraisana ilay mpiasa. Mandamina ireo lesoka ireo ny mpiandraikitra ary efa manafaingana ny asa ny minisitera rehetra voakasika. Matetika, tsy mitovy ny anaran’ilay olona noraisina niasa sy ny nanao fifanarahana tamin’ny minisitera ka mila fandalinana. Nanao hetsika fanairana ny tomponandraikitra ireo mpiasan’y CTC satria tsy mbola nisitraka karama tamin’ity herinandro ity.Vonjy L’article Mpiasan’ny CTC sy hotely hopitaly: alefa any amin’ny tobim-pahasalamana a été récupéré chez Newsmada.
Filohan’ny Caf: kandidà amin’ny Fifidianana i Ahmad
Tsy niandry ny datin’ny 2 marsa ny Tribonaly misahana ny fanatanjahantena (TAS) fa avy hatrany dia namoaka didy fa afaka milatsaka hifaninana ho filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina (Caf) i Ahmad, filoha am-perinasa. Afaka manohy ny fampielezan-keviny izany ny tenany, mandresy lahatra ireo federasiona amin’izay fandaharanasany manaraka. Tsiahivina fa nandalo fahasahiranana maro i Ahmad, tao anatin’ny telo volana farany. Ny volana novambra, nosazin’ny Federasiona iraisam-pirenena, tsy mahazo misahana na mikasika resaka baolina kitra mandritra ny dimy taona ny tenany, noho ny resaka kolikoly sy fanamparam-pahefana. Ny volana janoary lasa teo, nolavin’ny vaomieram-pitantanana eo anivon’ny Caf ny filatsahan-kofidiny. Nametraka fitoriana tany amin’ny TAS ny tenany ka izao nahazo rariny izao satria sady miverina ho filohan’ny Caf no ho kandidà ihany koa. Marihina fa miisa dimy izany izao ireo kandidà hifaninana amin’ity dia ilay Ivoarianina, i Jacques Anouma, ilay Afrikanina Tatsimo, i Patrice Motsepe, ilay Senegaley, i Augustin Senghor, ilay Maoritanianina, i Ahmed Yahya ary i Ahmad. Raha tsy misy ny fiovana, hatao ny 12 marsa ho avy izao, any Rabat, Maraoka ny latsa-bato. TompondakaL’article Filohan’ny Caf: kandidà amin’ny Fifidianana i Ahmad a été récupéré chez Newsmada.